Tababaraha Manchester United oo ka hadlay arrinta Lukaku iyo Sanchez - BBC News Somali
Tababaraha Manchester United oo ka hadlay arrinta Lukaku iyo Sanchez
Xigashada Sawirka, BBC Sport
Lukaku ayaan safanin labadii kulan ee ugu horreysay tababare Solskjaer halka Sanches uu ku maqanyahay dhaawac
Ole Gunnar Solskjaer, oo ah tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United ayaa sheegay in ciyaartoyda uga ciyaara dhinaca weerarka ee kala ah Alexis Sanchez iyo Romelu Lukaku looga baahanyahay "dadaal ka yimaada dhankooda".
Sanchez oo 30 sano jir ah iyo Lukaku oo 25 sano jir ah ayaa u muuqday iney ka baxeen shaxda ciyaartoyda uu sida fiican u daneyn jiray macallinkii hore ee dhawaan laga ceriyay kooxdaas, Jose Mourinho.
Labadaasi ciyaaryahan ayaan inta badan ka soo muuqan jirin safka joogtada ah ee kulamada u ciyaara kooxdan ka dhisan garoonka Old Trafford.
Yaa baddali doona Jose Mourinho?
Lukaku oo tababarkiisii ugu horeeyey la bilaabay Manchester United
Sanchez ma u wareegi doonaa Man city?
Tababare Solskjaer ayaa sheegay in isagu dhankiisa uu ciyaaroydan siiyay "tilmaamo" ku saabsan sida ay horumar u gaarsiin karaan xirfadahooda, hase ahaatee iyaga dhankooda looga baahanyahay "iney fadhiga ka kacaan oo ay dadaalaan".
Sanchez ayaa markii ugu dambeysay United u ciyaaray kulankii ay bishii Nofeembar la yeesheen kooxda Crystal Palace, wuxuuna tan iyo xilligaas ku maqan yahay dhaawac ka soo gaaray murqaha bowdada.
Lukaku, oo ay kooxdan sannadkii 2017-kii kusoo iibsatay lacag dhan £75 malyan oo gini ayaan wali ka ciyaarin labadii kulan ee ugu horreysay inta uu hpoggaanka kooxda Manchester United la wareegay macallin Ole Gunnar Solskjaer.
Laakiin wuxuu tababarka kusoo noqday ka hor kulanka ay Axada Manchester United ku booqan doonto kooxda Bournemouth.
Romelu Lukaku wuxuu dhaliyay 6 gool isagoo xilli ciyaareedkan saftay 16 kulan, halka Sanchez, oo bishii Janaayo ka soo tagay kooxda Arsenal uu dhaliyay 1 gool oo qura, ka dib 10 kulan oo uu ciyaaray.
"Romelu, Anthony [Martial] iyo Alexis waxay qaateen tababar aad iyo aad u sahlan shalay, marka aynu aragno maanta sida ay u imaadaan iyo waxa ay sameeyaan" ayuu yiri Solskjaer mar uu warbaahinta la hadlay maanta oo Jimce ah.
Muuqaal, Madax ka tirsaneyd hay'adda Sirdoonka Soomaaliya oo xilka laga qaaday
Maxay Israa'iil u doonaysaa inay ka mid noqoto Midowga Afrika?
23 Luulyo 2021
"Waxaan guursaday qofkii dilay ninkeyga si aan uga aarguto"
19 Luulyo 2021
Safaa: "Ninkeyga ayaa i kufsaday, habeenkii ugu horreeyay ee aqal galkeena"
15 Luulyo 2021
Nin dumarka 60 jirka ah si khiyaano ah u dhaca oo la qabtay
Malaayiin dollar oo loogu tala-galay la dagaallanka Al-Shabaab oo la "lunsaday"
21 Luulyo 2021
Abwaankii la diriray dowladihii Soomaaliya soo maray wixii ka horreeyay 1990
14 Luulyo 2021
Filimkii uu fikradda ka helay ninkii gabdhaha Muqdisho telefoonnada ka qaadanayay
13 Luulyo 2021
Madaxweynayaashii hore ee Afrikaanka ah ee xabsiga la dhigay
12 Luulyo 2021
"Itoobiya waa iney iib ama kiro ku heshaa dekad"
Xildhibaan Soomaali ah oo sidii Qadaafi ilaaladeeda ka dhigatay dumar
TPLF ma waxay ku duushay gobolka Cafarta?
Ma ogtahay in gobolka Baay uu heysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka Soomaaliya?
Xaas iyo ilmo qarsoon miyaa Salman Khan u jooga Dubai?
Nin hinaasay oo bambo ku weerarray meel ay joogtay saaxiibtii hore